Olee otu ị ga-esi hazie mbadamba gam akporo: Allzọ niile | Akụkọ akụrụngwa
Olee otú ịkpụzi gam akporo mbadamba
Edere Esteban | | android, Nkuzi
Ugbu a, ọtụtụ mbadamba na ahịa na-eji gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ. Yabụ nhọrọ nke ụdị dị na ahịa kachasị. Ya mere, ị ga-enwe mgbe niile akụkụ ụfọdụ n'ime akaụntụ mgbe ị na-azụta mbadamba nkume ọhụrụ. Mgbe obere oge gachara, nsogbu nwere ike ịdị na mbadamba nkume ahụ.
O nwere ike ime na ụfọdụ malware abanyela n'ime ya, ma ọ bụ na enwere nsogbu na arụmọrụ ya. Ma obu na onyenwe ya na-eche ire ya. N'ọnọdụ dị otú ahụ, a nnọọ Ugboro ngwọta na gam akporo mbadamba bụ nzọ na ịkpụzi ya.
1 Gịnị na-akpụzi mbadamba gam akporo?
2 Hazie mbadamba gam akporo
2.1 Hazie site na ntọala
2.2 Hazie mbadamba site na mgbake menu
Gịnị na-akpụzi mbadamba gam akporo?
N'ihe banyere ngwaọrụ gam akporo, dị ka mbadamba, anyị nwere ike ikwu maka ịhazi ma ọ bụ weghachi ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Usoro a pụtara na data niile dị na mbadamba nkume ga-ehichapụ. Yabụ faịlụ niile dị na ya (foto, vidiyo, egwu, akwụkwọ, wdg) na mgbakwunye na ngwa ndị ebudatara, ga-ewepụ kpamkpam. A gaghị enwe akara nke faịlụ ndị a na mbadamba.
Nke a bụ usoro ihe ike, mana ọ na-eme kwuru mbadamba gam akporo laghachi na mbido ya. Kemgbe mgbe ị na-ahazi, ọ laghachiri na steeti ọ hapụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ọ bụ ya mere eji mara ya dị ka nrụpụta ụlọ ọrụ. Nke a bụ ihe a na-eme n'oge a kapịrị ọnụ, ebe ọ pụtara na ọ ga-efunahụ data niile na mbadamba nkume ahụ.
Ọ bụ ya mere, ma ọ bụrụ na onye nwe ya na-eche echiche nke na-ere kwuru mbadamba, ma ọ bụ inye ya onye ọzọ, bụ ụzọ dị mma iji gbochie onye ahụ ịnweta data gị. Ma ọ bụrụ na nje abanyela, ihe nwere ike ime na ngwaọrụ gam akporo, nhazi bụ ụzọ iji wepu ya, ma ọ bụrụ na ọnweghị nhọrọ ọzọ na-arụ ọrụ na nke ahụ. Yabụ n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ bụ ihe enwere ike ịme. Iji nweta ya na mbadamba nkume, e nwere ụzọ dị iche iche. Dị anyị na-agwa gị n'okpuru.
Olee otú ịkpụzi iPad
Hazie mbadamba gam akporo
Ihe a na-emebu bụ na mbadamba gam akporo enwere ụzọ dị iche iche iji mepụta usoro a. N'okwu abụọ ọ bụ ihe anyị nwere ike ịnweta site na mbadamba onwe ya. Chọghị ngwaọrụ ọ bụla ọzọ iji nwee ike ịhazi ya. Ọ bụ ezie na enwere ike ịnwe ụdị na-anaghị ekwe anyị ma nke abụọ a. Ọ nwere ike ịdabere na ụdị ma ọ bụ ụdị ọ bụla, na mgbakwunye na ụdị nke sistemụ arụmọrụ ị na-eji.
Hazie site na ntọala
Firstzọ mbu iji hazie mbadamba nkume na gam akporo sitere na ntọala nke gị. N'ime ha enwere ngalaba nke ọ ga-ekwe omume ịmalite usoro a. Ya mere, anyị ga-emeghe ya ntọala mbụ. Ozugbo n'ime ha, ọnọdụ a kapịrị ọnụ nke ọrụ a nwere ike ịgbanwe site na otu ụdị gaa na nke ọzọ.
Na ụfọdụ mbadamba anyị ga-abanye nchebe ngalaba. Mgbe ndị ọzọ ọ bụ ngalaba nhọrọ dị elu nke anyị ga-abanye. N'ọnọdụ ọ bụla, n'agbanyeghị ọnọdụ gị, akuku nke masiri anyi ka ana akpo Backup / Weghachi. Ya mere, anyị nwere ike ịchọ ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'ime ntọala nke anyị gam akporo mbadamba nke mere na ọ bụ ngwa ngwa iji nweta ya na mbadamba. N'otu oge na ngalaba a, usoro ahụ nwere ike ịmalite.
Ihe mbụ a jụrụ ndị ọrụ bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ime nkwado ndabere. Dị ka mgbe ịhazi anyị ga-ehichapụ data niile na mbadamba ahụ, ọ dị mma ịmebe otu data ị na-achọghị ida. N'ihe banyere gam akporo, anyị nwere ike mfe ịzọpụta ndabere na Google Drive. Mgbe ị kwuchara, otu ọ ga - ekwe omume ịbịnye ngalaba ụlọ ọrụ nrụpụta data.
Ke ikpehe emi usoro ịhazi mbadamba nkume ahụ amalite. A ga-ajụ onye ọrụ ma ọ bụrụ na ha ejiri n'aka na ihe ha chọrọ ime. Ọ bụrụ na i nweela nkwado ndabere dị otu a, mgbe ahụ i nwere ike ịmalite ugbu a. Yabụ na ị ga-enye ya ka ịnabata. Mgbe ahụ, nhazi nke mbadamba gam akporo a ga-amalite. O nwere ike were nkeji ole na ole iji wuchaa ya, ọ dabere na ọnụọgụ data echekwara na ya.
Hazie mbadamba site na mgbake menu
Enwere ụzọ nke abụọ, ụzọ dị mma iji kọwaa mbadamba gam akporo. Ọ bụ maka iji menu azụ akpọrọ. Tonweta ya ga-adịgasị iche site na otu ụdị gaa na nke ọzọ, ebe ọ bụ na e nwere usoro abụọ. Nke mbụ bụ gbanyụọ mbadamba nkume, wee debe bọtịnụ ike na olu n'otu oge maka sekọnd ole na ole, rue mgbe menu gosipụtara na ihuenyo ahụ. N'okwu nke abụọ, usoro ahụ bụ otu, naanị enwere mbadamba nkume nke ị ga-agbanye ma wedata olu.
Ya mere, dabere na ika nke kwuru mbadamba, e nwere ohere kwuru menu. Ozugbo ejirila usoro dị na ajụjụ, menu nhọrọ dị iche iche gosipụtara na ihuenyo ahụ. Otu n'ime nhọrọ dị na ihuenyo ahụ bụ nrụpụta orylọ ọrụ ma ọ bụ Hichapụ data, aha abụọ nwere ike ịpụta n'ọtụtụ ọnọdụ. Nke a bụ nhọrọ ịchọrọ iji n'oge ahụ.
Iji bọtịnụ olu na ala ị ga-agagharị n'etiti nhọrọ ndị a. Mgbe ị ruru nhọrọ ihichapụ data, ị ga - eme ya jiri bọtịnụ ike nke mbadamba iji gosi. A ozi ga-egosipụta na ihuenyo na-arịọ onye ọrụ ma ọ bụrụ na ha ji n'aka na ha chọrọ ime nke a. N'ihi na usoro nke ịhazi usoro mbadamba gam akporo ga-amalite. Iji gosi, pịa bọtịnụ ike ọzọ.
N'ụzọ dị otú a, na formatting nke kwuru mbadamba na gam akporo ga-amalite. Ọzọ, usoro ga-a nkeji ole na ole iji wuchaa na mbadamba. Mgbe emechara ya, ozi ga-egosi na ihuenyo. Iji malite ya ọzọ, ihe nkịtị bụ na ị ga-eme ya họrọ nhọrọ "reboot system now". N'ụzọ dị otú a, sistemụ amalite ọzọ, mana jiri data niile ehichapụlarị na mbadamba. Alaghachi na steeti nke ọ hapụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » android » Olee otú ịkpụzi gam akporo mbadamba
Energy Sistem Frame Speakers, ma ọ bụ otu esi ejikọ nka na teknụzụ
Motorola Sonic Boost, ikuku okwu na Alexa na ọnụ ala